Su”aalahan Ka jawaab | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Apr 6, 2017 - jawaab
Su’aalahan ka Jawaab:
Shaqaalihi ayaa subax sidii joogtada u ahayd xaruntii shaqada yimid, albaabka hore ayey ku arkeen warqad ogeysiis ah. Warqadda waxaa ku qoran “Shirkadda iyo shaqaaleheeduba, waxey ka xunyihiin geeridii ku timid xubin katirsan shirkadda, oo ahaa qofkii kaa hortaagnaa hormarinta naftaada, waxaana kugu casuumeynaa inaad nagala soo qeybgasho tacsida marxuumka, oo ka dhaceysa guriga guddoomiyaha shirkadda”.
Qof kasta oo ogeysiiska aqriyaa wuu ka naxayaa marka kowaad tacsida, haddana wuu yaabaya, oo wuxuu is weydiinayaa yuu ahaa qofkii kaa hortaagnaa hormarkaaga? laakin hadduuba hadda dhintay waa qeyr.
Isagoo su’aalo layaab iyo fikir ubadan isweydiinaya ayuu qofkasta oo shaqaalaha ka mid ihii tagay gurigii lagu ballamay. Markii la iskugu yimid meeshii tacsida, dad maamulkii shirkadda u badan ayaa ku hareereysan sanduuq weyn oo ah kan maydka lagu qaado, oo qeybta kore ka furan.
Maamulka ma ahane inta kale shaqaalaha boos yar ayaa loo banneeyey oo ay ka arkaan, iskuna bad badalaan, oo qofba mar soo istaago.
Qofkasta markuu sanduuqa soo kor istaago, wuxuu arkayaa muraayad weyn, oo lala ekeysiiyey sanduuqa, oo isagii iska dhex arkayo, waxaa intaas u sii dheer, fallaar ayaa muraayadda qeybteda hore ka baxeysa oo tilmaameysa qoraal qeybta hore uga qoran muraayaadda.
Muraayadda qeybteeda hore waxaa ku qoran ” Haddiiba uu jiro qof kaa hor istaagi kara hormarkaaga, waa isla naftaada. Adiga ayaa ah qofka ka hor istaagi kara naftiisa hormarka. Noloshaadu is badali meyso markey madaxdaadu isbadasho, saaxibkaagu is badalo, Shirkaddaadu is badasho, noloshaadu waxey is badaleysaa markaad adigu is badasho, markaad ogaato ineysan jirin wax ku xadidi kara, naftaada ma ahane, markaad ogaato inaad adigu naftaada masuul ka tahay, dib u dhac iyo hormarba, markaad qirato gafkaaga, markaad yareyso cudurdaarka, markaad isku filnaato, markaad ka maaranto ku tiirsanaanta fikradaha iyo maskaxda dadka kale. Xirirka ugu wanaagsan ee ad qof la leedahay, waa midka aad naftaada la leedahay. Bal is qiime xaggeed joogta ? door nooce ah ayaad se ku leedahay meeshaad joogto? Ma adigaa ku yimid kartidaada, mase ku joogtaa kartidaada?